Myanmar oo kordhisay cadaadiska ay ku heyso muslimiinta Rohingya - BANDHIGA
Myanmar oo kordhisay cadaadiska ay ku heyso muslimiinta Rohingya
Shirkada ugu weyn ee dhanka taleefanada dalka Myanmar ayaa shaaca ka qaaday in dowlada ay qadkii isgaarsiinta ka goysay gobolada Rakhine iyo Chin ee dhaca galbeedka Dalkaasi.
Arimahaan ayaa soo baxaya iyadoo laga cabsi qabo tacadiyo ka dhan ah qowmiyada muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya.
Bilo ka hor ayay aheyd markii xukuumada dalkaasi ay ka qaaday xayiraada dhanka isgaarsiinta ee saaran gobolka Rakhine, kadib cadaadis kaga yimid qaramada Midoobay.
Milatariga Myanmar ayaa dagaal xoogan kala kulmaya maleeshiyo Buddhist ah oo ku sugan gobolka Chin.
Shirkada Telenor ayaa sheegtay in afar magaalo oo waaweyn ay ka jirto isgaarsiin la’aan saameysay Dadweynaha.
Afhayeenka Milatariga Myanmar Tun Tun Nyi, a Myanmarese ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in ay la socdaan arintaan balse aysan garaneyn arinta ka Danbeysa.
Amarka kasoo baxay 23-kii Janaayo, maxkamada cadaaladda ee caalamiga ah (ICJ) ayaa ku amraya Myanmar inay ka hortagto dhamaan falalka xasuuqa ah ee lagu hayo muslimiinta Rohingya, waxay muhiim u tahay ilaalinta haraadiga qowmiyada Rohingya ee ku haray Gobolka Rakhine.
Maxkamadda ayaa waxa ay sidoo kale si wada jir ah u qaadday “tallaabooyin ku meelgaar ah” oo u baahan Myanmar inay ka hortagto xasuuq isla markaana ay qaado tillaabooyin lagu ilaalinkaro caddeynta.
Milatariga Myanmar ayaa sameeyay xasuuq ba’an oo ka dhan ah Rohingya, oo ay ka mid yihiin dil, kufsi, iyo dab qabadsiin, oo qarka u saran intii lagu gudajiray ololihiisii ama sanadkii ​​dabayaaqada ahaa ee 2017, taas oo ku qasabtay in kabadan 740,000 Rohingya inay u qaxaan dalka dariska la eh ee Bangladesh.
Bishii Sebtember 2019, Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Xaqiiqo Raadinta Myanmar ayaa ogaatay in 600,000 oo reer Rohingya, kuwaas oo ku haray Myanmar, laga yaabo inay la kulmaan halis weyn oo xasuuq ah.
Param-Preet Singh , oo ah agaasimaha cadaalada ee hey’adda Human Rights Watch ayaa waxa uu yiri “Sharciga ICJ ee Myanmar wuxuu qaadayaa tillaabooyin la taaban karo oo looga hortagayo xasuuqii Rohingya .
Dowladaha daneeya iyo hay’adaha QM waa in ay hadda miisaamaan si loo hubiyo in amarkan la dhaqan galiyo maadaama kiiska xasuuqa uu horay usocday.”
Amarkan wuxuu daba socdaa codsiga Gambiya ee ay Nofeembar 11, 2019 u gudbisay maxkamadda taas oo ku andacoota in tacadiyo militariga Myanmar ee gobolka Rakhine ee ka dhanka ah Rohingya ay ku xadgudbeen heshiiskii ka hortagga iyo ciqaabta ee xasuuqii isla markaana ay si deg deg ah u raadinayeen tallaabooyin ku meelgaar ah.
ICJ ayaa dhegeysatay dhageysiga dalabaadka kumeelgaarka ah ee Gambiya bishii Diseembar.
Amarka ku- meelgaarka ah ee ICJ waa mid sharci ahaan ku qasbaya dhinacyada.
Bishii Nofembar, Myanmar waxay si cad u aqoonsatay awoodda ICJ waxayna bishii Disember, Aung San Suu Kyi, oo wakiil ka ah Myanmar ka hor ICJ awoodeedii wasiirnimo ee dibedda, waxay qiratay doorka maxkamadda in ay tahay “meel muhiim u ah cadaaladda caalamiga ah.”
Maxkamaddu waxay si wada jir ah u amartay Myanmar inay ka hortagto dhamaan falalka ku xusan qodobka 2aad ee Shirkii xasuuqa, in la hubiyo in ciidankeedu uusan geysan xasuuq, ayna qaadaan tillaabooyin wax ku ool ah si loo ilaaliyo cadaymaha la xiriira kiiska xasuuqa.
Maxkamaddu waxay sidoo kale amartay Myanmar inay ka warbixiso dhaqan galinta amarkan afar bilood gudahood, ka dib lixdii biloodba wixii ka dambeeya.
Amarku ma hor-istaagayo su’aasha ah awoodda ay u leedahay maxkamadda inay la tacaasho mudnaanta kiiska, oggolaashaha kiiska maxkamadda horteeda, ama mudnaanta eedeymaha Gambiya ee ah in Myanmar ay ku xad gudubtay qodobbadii Shirkii xasuuqa.
Kiis ka hor maxkamadda ICJ ayaa sanado qaadan kara si go’aan loo gaaro.
Sida ku xusan qodobka 41 (2) ee Sharciga ICJ, amarada ku-meel gaarka ah ee maxkamadda waxaa si toos ah loogu diraa Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay.
Amarka noocan oo kale ah wuxuu kordhin doonaa cadaadiska golaha si uu u qaado tallaabo la taaban karo oo ka dhaca Myanmar, taas oo ay ku jirto iyada oo loo marayo qaraar adag oo wax looga qabanayo qaar ka mid ah tilmaamayaasha ujeedo xasuuq ah oo lagu qeexay warbixintii guud ee 2018 ee howlgalka xaqiiqa raadinta ee caalamiga ahaa.
Tusaale ahaan, Golaha Amniga wuxuu u gudbin karaa qaraar ku hagaya Myanmar inay kor u qaado xayiraadaha ku saabsan xorriyadda dhaqdhaqaaqa Rohingya, baabi’inta xayiraadaha aan loo baahnayn ee helitaanka gargaarka bini’aadminimo ee Gobolka Rakhine, kalasoocida shuruucda takoorista, iyo mamnuucida dhaqamada xaddidaya galaangalka Rohingya ee waxbarashada, daryeelka caafimaadka, iyo hab-nololeedka.
Ilaa iyo hadda, Golaha Amniga wax talaabo ah kama qaadin Myanmar, qeyb ahaan sababtoo ah Russia iyo Shiinaha oo raba inay rabaan inay adeegsadaan diidmada qayaxan si ay u difaacaan dowlada iyo militariga Myanmar.
Singh wuxuu yiri “Amarka ICJ wuxuu keenayaa baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan xasuuqii foosha xumaa ee ka dhanka ah Rohingya wuxuuna sare u qaadayaa qarashka siyaasadeed ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay jawaabta daciifka illaa iyo hadda,” “Shiinaha iyo Ruushka waa inay joojiyaan inay hor istaagaan Golaha Amniga tallaabada ay ka qaadayaan Rohingya.”
Xitaa iyada oo loo cusbooneysiiyay Golaha Amniga, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres wuxuu arrinta Myanmar u horkeeni karaa golaha hortiisa iyadoo la raacayo qodobka 99 ee Axdiga Qaramada Midoobay .
Bishii Sebtember 2, 2017, Guterres wuxuu warqad u qoray madaxweynaha Golaha Amniga isagoo ku boorinaya goluhu inuu “isdifaaco xasilooni iyo deganaansho si looga fogaado musiibo bini’aadannimo, ‘iyo” ixtiraam buuxa oo xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha, iyo joogtaynta iyo badbaadada wada-hawlgalayaasha Qaramada Midoobay si ay gargaar bani’aadamnimo u siiyaan kuwa u baahan carqalad la’aan.
Hay’adaha kale ee Qaramada Midoobay waa inay qaadaan tillaabooyin lagu xoojinayo amarka, ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ay qortay Human Rights Watch.
Golaha Xuquuqda Aadanaha iyo Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa gudbin kara qaraarada ugu baaqaya Myanmar inay u hogaansanto shuruudaha.
Tani waxay ku kicin kartaa dalal kale inay qaadaan tallaabooyin la taaban karo xiriirkooda laba geesoodka ah ee Myanmar.
Markii la fayl gareeyay kiiska xasuuqii, Gambiya waxaa taageeray 57 xubnood oo ka tirsan Ururka Iskaashiga Islaamka .
Markay ahayd Disembar 9, 2019, dawladaha Kanada iyo Nederland , labada dhinacba shirweynihii xasuuqa, waxay ku dhawaaqeen inay u arkaa inay tahay “waajibaadkooda ah inay taageeraan Gambiya horteeda maxkamadda ICJ, maadaama ay tahay inay khusayso dhammaan bani’aadamka.”
2020, Dowlada Ingiriiska waxay soo dhoweysay kiiska Gambiya ee ka dhanka ah Myanmar.
Dhinacyada kale ee heshiiska waa in ay ku cadaadiyaan Myanmar in ay u hogaansamaan amarada maxkamada.
Haddii Myanmar ku guuldareysato inay ficil sameyso, Gambiya waxay kor u qaadi kartaa u hoggaansanaanta Myanmar ee Golaha Amniga sida ku xusan qodobka 94 ee dastuurka Qarammada Midoobay.
“Taageerada sii kordheysa ee caalamiga ah ee kiiska Gambiya waxay sare u qaaddaa mawqifka ay Myanmar u leedahay inay ku lug yeelato hawsha ICJ qaab macno leh oo ay u beddesho qaabkeeda Rohingya,”
“Dowlada Myanmar kuma qarin karto gadaashooda saaxiibadeeda awooda badan ama calanka gobanimada si ay uga baxsadaan mas’uuliyadeeda ku xusan Shirkii xasuuqa.”
Wadamada caalamka ayaa ugu baaqaya Myanmar in ay joojiso dhibaatada ay ku hayaan Muslimiinta Rohingya.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee B/Dhexe oo booqasho ku tagay saldhigyada ay Iran duqeyn ka geysatay
Wasiirka Maaliyada oo kulan la qaatay safiirka Ruushka ee Somalia